ObekwiSibaya nefilimu entsha kaShaka
OBENGUMLINGISI weSibaya, u-Ayanda Borotho wenze okwehlukile ngokuqhamuka nefilimu yopopayi ekhuluma ngomlando kaShaka Isithombe: INSTAGRAM
Thokozani Ndlovu | June 28, 2021
KUZOKWENZEKA okwehlukile kukhishwa ifilimu eyenziwe yaba wopopayi ekhuluma ngomlando weSilo uShaka kaSenzangakhona.
Ifilimu uShaka iNkosi Yamakhosi ezokhonjiswa embukisweni wamafilimu iDurban International Film Festival (DIFF) yenziwe ngowayengumlingisi weSibaya, u-Ayanda Borotho ebambisene nozakwabo uTerry Pheto, Manzini Zungu, Amanda Zungu noNdabo Zulu.
U-Ayanda uthe bebefuna ukwenza okwehlukile bexoxa umlando kaShaka ngokuthi benze ifilimu ezoba ngopopayi ukuze nezingane zingasali ngaphandle ekuqondeni umlando weLembe.
“Kunamafilimu amaningi akhuluma ngomlando kaShaka kodwa iningi lawo ashiya ngaphandle izingane ukuthi zibe nothando lomlando. Thina sithathe isinqumo sokuthi senze ifilimu ibe ngopopayi ukuheha nabancane kuyona. Kule filimu kusetshenziswa isiZulu ngokunjalo namahubo akwaZulu yilawa ajwayelekile, umehluko yizithombe ezingopopayi. Yize iyifilimu emfishane kodwa inesigqi ngoba iphethe wonke umlando ngeLembe. Sinethemba lokuthi nezingane zizoyijabulela,” kusho u-Ayanda.
Kuyona kusetshenziswe amazwi abalingisi okungelakhe u-Ayanda, uThemba Ntuli, Lilian Dube, Mondli Makhoba, Motlatsi Mafatshe, Dawn Thandeka King, Thulani Stukie Mtsweni, Nhlanhla Mdlalose, Mbuso Khoza noNomsa Xaba.
U-Ayanda uthe le filimu yenziwe yiPacinamix ngaphansi kwenkampani yabo i-Avad Media ephethwe ngabesifazane abamnyama kuphela.
Inkampani yabo iseyintsha njengoba ineminyaka emithathu kodwa ibukeka ifike ngomfutho njengoba kukhona nomunye umdlalo wethelevishini ematasa nawo obizwa ngoNqobile nozoqala kuMzansi Magic ngoJulayi 5. Yize ematasa nokuba wuphrojusa, uthe ukulingisa nokubhala imidlalo ngeke akuyeke.
IDIFF, okuzokhonjiswa kuyona ifilimu yabo ekhuluma ngempilo kaShaka, iqala ngoJulayi 22 kuya ku-Agasti 1. Yethulwe kuleli sonto lapho kumenyezelwe khona ifilimu ezovula okuyi-The Eagle’s Nest nezovala i-Threshold.